Varume Marías. Kubvunzana nemunyori weDove Njiva Yokupedzisira | Zvazvino Zvinyorwa
Varume Marías muna Chivabvu apfuura akaburitsa bhuku rake rekupedzisira rakanzi Njiva yekupedzisira. Carmen Salinas, uyo ari kumashure kweVarume, anobva kuGranada uye akatohwina mubairo weCarmen Martín Gaite Novel mu2017 nekutanga kwake, Pukata, hove uye hove dzegungwa. Ndinokutendai zvikuru iyo nguva uye kutarisirwa kwakatsaurirwa kundipa ini iyi hurukuro kwaanotiudza nezve iri basa nyowani uye pamusoro pezvose zvishoma.
Varume Marías - Bvunzurudzo
MABHUKU ANOITIKA: The njiva yekupedzisira ndiyo nyaya yako nyowani. Chii chaunotiudza nezvazvo uye iyo pfungwa yakabva kupi?
VANHU MARÍAS: Andalusia yaigara iri iyo mavambo. Iko kudiwa kwekumusunungura iye. Uye ndeyekuti Andalusia yakafanana nemhondi dzakanaka: hapana munhu angambozvifungira. Ndiani angavimba nechiedza? Ndiwo mumvuri unotityisa. Asi kuseri kwekujeka kwakadai kune nyaya dzakashata kwazvo. Yakasviba kwazvo. Zvakanyatsovanzwa. Chii kusvika kwevaAmerican muRota muma50.
Rota, guta rakarasika kumaodzanyemba kweSpain iro raingova nemigwagwa mina yaifambwa nemadhongi akatakurwa nezvikwama zvechigaro, kwaiuya mvura kubva mumatsime uye pakanga pasina magetsi, nekukasira akagamuchira kusvika kweUnited States of America kune chinodikanwa chengarava , iwo maRolling Stones, Coca-Cola uye Mickey Mouse. MaAmerican akasvika mushure memwedzi pasi pegungwa nehomwe dzavo dzakazara nemari uye vachida kupembera. Zvese zvaive zviri nyore, ruvara, mimhanzi ... uye kunyangarika. Vakadzi vakanyangarika zuva nezuva uye hapana akamuferefeta. Mumwe wavo aiva Inés, musikana wechidiki Diana anga achitsvaga nhasi. Asi kutsvaga uku kwakanetsekana nekuti Diana akaonekwa pamberi penzvimbo ine hunyanzvi yakamomoterwa uye ane mapapiro makuru akasonerwa kumusana kwake.
MM: Ini handirangariri bhuku rekutanga randakaverenga, kutaura chokwadi. Ndinoyeuka yekutanga iyo yakandibata chaizvo: Yakadaro Zarathustra, ivo Nietzsche, iyo yandakamhanyira mairi gumi nerimwe kana gumi nembiri. Nyaya yekutanga hongu, hongu. Ini ndinofunga ndanga ndichinyora yakafanana nyaya hupenyu hwangu hwese: iya yemukadzi asingakwanise kuwana nzvimbo yake pasi.
MM: Wangu musoro munyori ndiye Dostoevskiy... Victor weMuti ndeyechipiri kune chero.
MM: Ana Ozores, iyo Regenta, kubva pane inozita rine zita rimwe chete. Anoratidzika kwandiri kuve mumwe wevanonyanya kufadza mavara munhoroondo yezvinyorwa uye ndinodada kuti anobva kuSpain.
MM: Nzvimbo yacho inofanirwa kuve yakachena uye yakashambidzika. Ini handishande pakati pemakakatanwa, Ndinodzivirira, handifunge zvakajeka.
MM: La noche, pasina mubvunzo. Chimwe chinhu chine husiku ndiyo imba yezvipoko. Uye zvinyorwa zvinoziva zvakawanda nezve izvi.
MM: Iko hakuna mhando yandisingafarire. Gender rinongova bhokisi bhokisi nhema, pingi, yero ... izvo zvakakosha ndizvo zviri mukati maro.
MM: Ndakaverenga mabhuku akati wandei panguva imwe chete. Izvozvi ndine Buri, wekupedzisira weBerna González Harbor; chirevo cheMayakovsky; Zvakavanzika zvemabasa ehunyanzvi, naRose-Marie & Rainer Hagen uye Motel yevoyeur, naTalese. Ndinovakurudzira vese.
MM: Zvakaoma. Iyo yakaoma, haina kupokana. Kune vanyori vepamusoro-soro vane zvirongwa zvinonyanya kufadza vachitangisa mabhuku avo pamusika vasina zororo. Chipo icho muverengi anacho chakakura. Ndinovimba kuita gomba pakati pavo uye kuti zvinyorwa zvangu zvinogona zvakare kuita kuti vanhu vafare. Pamwe uvabatsire, sekubatsirwa kwandakaitwa nemamwe mabhuku. Izvo zvingave zvakanakisa. Ndicho chikonzero chakanditungamira kuburitsa: mabhuku akandipa zvakawanda, zvakanyanya, zvekuti, kana neimwe nzira ndichigona kuitira vamwe vanhu zvandakaitirwa nevamwe vanyori, ndinonzwa kugutsikana noupenyu. Mune rugare.
MM: Uku kurotomoka kwakatikuvadza isu tese, pasina kusarudzika, uye ndinofunga kuti ndichazonyora nezvazvo munguva inotevera. Asi haisati yazorora. Zvinhu hazvinzwisisike munguva yedu asi mune yako uye, mune ino kesi, kuchine zvakawanda zvasara kuti tifunge zvakaitika. Kuti uwane tsananguro, nzira yekuigamuchira.
Paradigm shanduko dzinoda kuteerera a nei, isu tinoshanda nenzira iyoyo. Tinoda zvese izvi kuti tigadzikane. Kana ndangoita izvo ndave nechokwadi icho art ichaedza kuzvitsanangura. Nguva dzose zvinoitika. Ndozviri zvehunyanzvi. Ndinovimba ndinogona kupa yangu shoma. Uye tinotarisira kuti zvese izvi zvinopera munguva pfupi. "Munguva pfupi" maererano nepfungwa yedu yenguva, kwete maererano nenhoroondo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Varume Marías. Kubvunzurudza nemunyori weiyo Yekupedzisira Njiva